Automotive Parts bobongolo Factory & Manufacturer - CBPMM
Automotive Parts koronosy
Electric Parts koronosy
Medical Plastic tsindrona
Sodina mety tsara koronosy
Plastic Cap koronosy
Automotive Parts bobongolo Factory & Manufacturer
Posted on November 28, 2018 November 28, 2018 ny CBPMM
1Plastic koronosy Manufacturing Industry
2Automotive Parts Plastic tsindrona koronosy
3Automotive faritra dia ahitana orinasa mpamokatra entana
4tombony amin'ny Automotive hamolavola Manufacturing
5Detailed endri-javatra mety ho tratra amin'ny sarotra rafitsary
5.1 High fahombiazana
5.3 mihoatra ny iray karazana plastika dia azo ampiasaina
6automatique mamonjy orinasa mpamokatra entana lany
7Tontolo iainana-namana dingana
8hahafantatra bebe kokoa momba Die Casting
Raha mitady ny tsara indrindra Automotive Parts koronosy toerana, ianao no ao an-toerana. Ny orinasa dia mitondra anao ny asa fanompoana lehibe izay mahazo ny hanana be dia be isan-karazany ny fanamboarana fiara sy ny fanoloana ny faritra eo amin'ny fomba tsara indrindra.
Ny milina dia be dia be koronosy-dehibe mba hanome anao ny tsara indrindra output. 60 taonina izy ireo ahitana ny 900 taonina, izay manasongadina ny fahaizany ny famokarana asa tsara. Ny fiara dia novokarina tamin'ny faritra samy hafa karazana koronosy izay ahitana, tsindrona koronosy sy extrusion koronosy - fiara faritra avo bobongolo izay manana hery sy mateza.
Ataovy azo antoka no tompon'andraikitra voalohany handray fepetra fisorohana sy mijanona mavitrika momba ny fikojakojana ny fiara. Ireo fepetra kely dia afaka manampy handresy olana lehibe. Noho izany, aza tsy ho foiko haingana dia haingana. Ny mahomby Automotive Parts hanampy anareo ny lasitra.
Automotive Parts bobongolo no manome asa fanompoana tsara indrindra ho an'ny entana faran'izay tsara. Ny faritra dia azo antoka ka tsy misy mbola tsy misy marimaritra iraisana ny tanjaka sy mateza.
Anjara tsirairay dia natao amim-pitandremana sy ny tsara mba tsy misy diso. Ny ekipa isan-karazany dia manome fiara lasitra izay handamina ny fiara ho amin'ny tsara. Novakiny fisaka sy mivelatra, novakiny Fanodina, taitra anoloan'ny, strut rea, sns
Isika na dia manana isan-karazany ny fiarakodia Accessories. Avo sy mateza hery, ny orinasa tsy hamela handeha misy kilema madinika izay mety ho sakana ho anareo.
Manome fahafahana hahazo fitaovana maro sy ny faritra ho an'ny fiara fanampiana. Izahay faritra fiara afa-tsy ianao, dia ho afaka hitondra ho matoky toy ny tianao!
HAMAKY Offset Printing Machines - Tips to Buy
Plastic koronosy Manufacturing Industry
Tsara tarehy be izay vokatra rehetra amin'izany ankehitriny na milina manokana nampiasaina ankehitriny mampiasa plastika. Tsy afaka tsy miraharaha ny zava-misy fa plastika dia mavitrika ilaina ampiasaina amin'ny vokatra sy ny entana isan-karazany. Plastika no hita amin'ny zavatra rehetra avy amin'ny PDAs ny basy sy ny Fanasoavam fitaovana maro. Manufacturers no tonga amin'ny mpanamboatra fahaizana maro izay manampy azy ireo ho ampahany fiara.
Fiara faritra ivelany
Atitany novolavolaina fiara faritra
Eo ambanin'ny Hood singa vita amin'ny plastika
Wrapping ny Atitany faritra fiara fampiharana
Haingon-trano plastika singa ho an'ny fiara Accessories
Accessories ny fiara-maneno
Air Condition fiara Accessories
Automotive Mitovy amin'ilay family mbola
Cup mpihazona fiara Accessories
Tombony ny Automotive hamolavola Manufacturing
Misy tombony maro ny Automotive Plastic hamolavola orinasa mpamokatra entana. Ny orinasa mpamokatra entana, fiara bobongolo orinasa no miroborobo satria ny lasitra manome matanjaka sy mateza vokatra izay mety ho lany nandritra ny taona maro. Ireto misy tombony lehibe izay milaza hoe nahoana no safidy lehibe.
Detailed endri-javatra mety ho tratra amin'ny sarotra rafitsary
Ny zavatra momba ny tsindrona koronosy dia ny lasitra satria manaiky avo be ny hafanana sy ny tsindry. Noho ny fisian'ny endri-javatra manan-danja izany, dia azo atao ny manampy maro ny antsipirihany. Raha ny plastika no nanosika mafy manohitra ny lasitra, ahitana tsipiriany saro-takarina rafitsary azo tanterahina.
Ary koa, noho ny fisian'ny tsindry ambony loatra io sy ny hafanana, ny koronosy dingana mahay manome avy sarotra sy be pitsiny ny endriny. Raha tsy misy izany dingana koronosy, rafitsary sarotra ho mandany fotoana sy lafo ny hanatratra.
HAMAKY tsindrona koronosy
Lafin-javatra iray hafa izay tsy azo odian-tsy hita dia ny hoe mandeha ho azy izany dia dingana. Dingana io dia ataon'ny milina sy namorona ny robots. Ny tsindrona koronosy fahaizany tsy mila be dia be ny asa. Hany mpandraharaha iray mety ho ampy ny hifehy sy hitantana ny milina. Izany no hamonjy Izay ho be dia be ny orinasa mpamokatra entana vola ho an'ny asa.
Mihena ny vola lany ny asa ireo orinasa afaka manome ny ankapobeny sisiny mba hampitomboana ny hatsaran'ny ny vokatra. Automatique dia mahery mba hamoronana safidy marina sy mazava amin'ny alalan'ny fampiasana tsindrona Lasitra Computer Nampiasa Design CAD sy manan-danja iray hafa rindrambaiko, Computer Nampiasa Manufacturing CAM. Close tolerances sy ny fandrindran-takila endrika azo atao mora foana.
Tontolo iainana-namana dingana
Casting maty no fomba mahomby izay afaka manome vokatra avy fiara lehibe. Maro ny Automotive lasitra Parts dia tratra amin'ny alalan'ny fomba io. Manana mavitrika tsipika ny mpiasa voaofana izay tena nahay ny fomba hamoronana ny bobongolo tsara indrindra mba hanome anareo faritra fiara amim-pahombiazana.
Ao amin'io Die mandatsaka Process, ny tena singa ampiasaina dia ahitana ny fanampiana ny lafaoro lehibe, ny metaly mitete, bobongolo fantatra koa amin'ny hoe maty sy ny zava-dehibe indrindra die nanarato teny milina. Metaly isan-karazany dia nampidirina ho ao an-vy lasitra mba hanao ny anjara fiara.
Ny tena mahazatra karazana metaly ampiasaina dia aluminium na ny zinc. Ny tsy ferrous firaka no ampiasaina matetika noho ny antony samihafa izay mandray anjara amin'ny hery sy mateza ny fiara anjara. Izany vy firaka levona miaraka amin'ny fanampian'ny ny lafaoro lehibe, ary nampidirina ho ao an-maty. Rehefa maty teo mihamangatsiaka ny endrika na ny ampahany manokana no tratra.
HAMAKY How To Choose Reliable Control Transformer Manufacturers
Misy karazany roa lehibe ny Die Casting Machines
Hot Antenimiera Machines
Cold Antenimiera Machines
Ao amin'ny Antenimieran'ny Hot Machines alloys amin'ny mpandrendrika ambany ny mari-pana dia ampiasaina izay ahitana Zinc. Kosa, fa Cold ambony Machines alloys izany, izay misy avo mpandrendrika mafana, ohatra Aluminum no ampiasaina. Ireo roa toy ny milina tsy mitovy izy ireo fitaovana samy hafa sy ny fahaizany.
Misy ampahany maro izay mitaky fiara manokana. Isika dia ekipa fanampiny-miasa mafy ny olona izay miasa mafy mba hanome anareo faran'izay tsara faritra fiara lasitra. Manana milina tsara mialoha fa manana endri-javatra isan-karazany. Karazana fiara rehetra no nampiantrano faritra.
Mampiasa tsindrona koronosy miaraka amin'ny fanariana faty isika dia afaka mamokatra tsara ny faritra fiara. Ny faritra izay vokatra avy amin'ireo karazana plastika koronosy mila raharaha akory zara raha indray mandeha ny famokarana dingana vita. Izany, dingana ireo dia tsy mahomby tahaka fanampiny asa mafy mila tokony hatao any aoriana.
Ny faritra manana fahitana efa saika vita mitaky tsy misy asa fanampiny. Rehefa afaka izany, dia faritra fiara nandroahana azy avy ny fampidirana intsony Lasitra fanodinana dia matetika ilaina.
Amin'ny faritra fiara maro rehefa vita amin'ny plastika ny ankapobeny lanjan'ny fiara ihany koa raha mihena izay antony lehibe. Izany, amin'ny alalan'ny fampiasana plastika singa ho an'ny fiara, heriny dia tsy azo vonjena sy solika-fiara mahomby natao.
Ny maotera kely mihetsiketsika amin'ny lanja, tsy mandany solika sy entona vitsy izay manimba ny tontolo iainana. Amin'ny alalan'ny fampiasana plastika faritra fiara ao amin'ny maotera sy ny afovoan-fiara na dia ny lehibe indrindra dia nandatsaka entana fiara-kijanona eo amin'ny lanja ny fandehan'ny fotoana.
Ity teny ity Posted in ny fanarianasy-dry fiara koronosy , fiara anjara koronosy , fiara faritra , maty niampatra , ny fanariana, tsindrona koronosy, Plastic koronosy, vy koronosy.
Plastic Best Shinoa bobongolo Manufacturer (CBPMM) dia orinasa Sinoa mpitarika manokana eo amin'ny sehatry ny plastika sy ny orinasa mpamokatra entana tsindrona bobongolo asa. Izahay niorina tamin'ny taona 2003 sy ny asa dia mifototra avy tany Shanghai, Shina. Manaraka fomba hentitra tsara sy ny fitsipika, izay miasa ho antsika iray amin'ireo tsara indrindra sady mitondra kalitaon'ny tolotra ao Shina.
Medical Plastic tsindrona bobongolo: ny zava-drehetra tokony ho fantatrao
CNC Machining: ny zava-drehetra tokony ho fantatrao
Tsindrona koronosy Service Manufacturer
Efa nahazo fanontaniana? Manorata aminay!